Fa maninona ny hopitaly no tsy afaka hitovy amin'ny trano fandraisam-bahiny?
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fahasalamana » Fa maninona ny hopitaly no tsy afaka hitovy amin'ny trano fandraisam-bahiny?
Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Safety • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Enga anie 27, 2021
Namaky 20 aho
Hopitaly mifanohitra amin'ny fandraisam-bahiny
Ny toeram-pizahan-tany fizahantany ara-pahasalamana, toa an'i Bangkok na Dubai, dia mahatonga ny hopitaly mihoatra ny trano fandraisam-bahiny. FA ny fidirana amin'ny efitrano fandraisam-bahiny na hopitaly any New York dia mety hiaina zavatra mampatahotra.
Mifanohitra tanteraka amin'izany fa ny teny hoe "hopitaly" dia ao anatin'ny asa "fandraisam-bahiny" satria izy roa dia nalaina avy amin'ny fototeny latin midika hoe "fandraisana olona amina vahiny na vahiny."
Ny mpitantana ny hopitaly dia tsy mahita ny toerana misy azy ireo ho toy ny toerana fampiononana fa kosa toerana misy aretina sy aretina.
Tian'ny talen'ny hopitaly ny marary manaiky fa miditra hopitaly fotsiny dia tsy mahazo aina.
Tsy nisy na inona na inona tamin'ny fiainako na ny fanabeazako nanomana ahy ho an'ny bedlam izay misy ao ambadiky ny biriky sy ny feta any amin'ny hopitaly na departemanta ER. Ny mpitantana ny hopitaly sy ny mpiasan'ny fahasalamana dia manana fotoana (ary angamba ny adidy) hamadika ireo tontolo mahatsiravina ireo ho toerana izay mandrisika ny fahasalamana sy ny fahasalamana ary tsy hanampy trotraka sy tahotra sao harary. Ny trano fandraisam-bahiny dia manome ny prototype sy ny tondrozotra hanaovana fanovana misy dikany amin'ny tontolo iray mahatsiravina.
Raha nanam-paharetana tany amin'ny hopitaly New York ianao na nandany fotoana tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny New York, fantatrao fa ny tsy fisian'ny fihetsika tsara ho an'ny mpiasa ao amin'ny hotely, ny fampiasa amin'ny hotely, ny habaka amin'ny hotely, ary ny fahadiovan'ny hotely dia miteraka fanahiana mitombo. amin'ny tahotra mitohy. Angamba izany no mitranga (farafaharatsiny any amin'ny hopitaly New York) satria tsy hitan'ny mpitantana ny hopitaly ho toeram-pampaherezana ny toerana misy azy ireo fa toerana marary sy aretina; ny fanasitranana sy ny fahasalamana dia azo atao ao an-trano, amin'ny spa, na amin'ny Four Seasons.
Anontanio izay mpitantana hopitaly hanazava ny tontolon'ny asany ary ny valiny dia mety hoe mila vitaly, sy data, ary fanairana sy marary tsaratsara kokoa izy ireo izay mahatakatra fa ny fanaintainana rehetra dia tsy azo hajanona sy ny fanekena izay marina any amin'ny hopitaly midika izany fa tsy hahazo aina ianao ary tsy ho ampoizina ny ho avy. Mametraha fanontaniana iray ihany avy amin'ny tompon'andraikitra amin'ny hotely ary mety hiteny ny valiny hoe: "Ho orinasa mandray vahiny indrindra eto an-tany - amin'ny famoronana traikefa amin'ny fo ho an'ny Vahiny, fotoana manan-danja ho an'ny mpikambana ao amin'ny ekipa, lanja lehibe ho an'ny tompona ary fiantraikany tsara eo amin'ny Fiaraha-monina ”( https://notesmatic.com/mission-and-vision-of-hilton-worldwide-an-analysis/ ).
Mifanohitra tanteraka amin'izany fa ny teny hoe "hopitaly" dia ao anatin'ny teny hoe "mampiantrano olona", satria izy roa dia nalaina avy amin'ny faka latinina izay midika hoe "fandraisana olona amina vahiny na vahiny."
Mazava fa samy manana ny mampiavaka azy ireo hotely sy hopitaly:
1. Manompoa mpanjifa mitaky fitakiana be dia be
2. Ampiasao hierarchy lehibe an'ny mpiasa manana andraikitra isan-karazany
3. Ny fandoavam-bola dia mifamatotra hatrany amin'ny fanombanan'ny mpitsidika / marary
Na dia fantatry ny trano fandraisam-bahiny aza ny fifandraisan'izy ireo amin'ny besinimaro ary manadihady ny fikarohana eny an-tsena izay nanjary fanatsarana sy fanavaozana miaraka amin'ny tanjona hanatsarana ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, ireo hopitaly dia tsy niraharaha ny zava-misy fa ny asany voalohany dia ny mamadika marary marary ho olona tsara sy tsy hampitombo ny tombom-barotra ambany. Noho ny iraka ampanaovina diso azy ireo dia kely ny (raha misy) fampifangaroana eo amin'ny sehatry ny hotely sy ny hopitaly.
Fandinihana fahafaham-po amin'ny marary
trano fandraisam-bahiny 2 1
Ny fanovana ny rafitry ny fahasalamana dia manery ny hopitaly hanan-danja kokoa amin'ny fankatoavana ny marary ary ny fahafaham-po amin'ny marary dia arahi-maso avy amin'ny Hopitaly ho an'ny mpanjifa momba ny fikarakarana ara-pahasalamana sy ny rafitra 2010 (HCAHPSA) ary ny fanadihadiana nataon'ny Press Ganey.
Ny fanadihadiana nataon'ny HCAHPS no fanadihadiana nasionaly, namboarina ary notaterina ampahibemaso momba ny fomba fijerin'ny marary ny fikarakarana hopitaly. Mametraka olana momba ny fifandraisana amin'ny mpitsabo mpanampy sy ny dokotera, ny fandraisan'ny mpiasan'ny hopitaly ny fahadiovana sy ny fahanginan'ny hopitaly, ny fitantanana fanaintainana, ny fifandraisana amin'ny fanafody, ary ny drafitry ny fivoahana. Ity fikarohana ity dia nanjary iray amin'ireo fepetra ampiasaina amin'ny fikajiana ny fandoavam-bola miorina amin'ny vidin'ny hopitaly. Ankoatra ny famerenam-bola, ny fahafaham-po amin'ny marary dia mety ho marika amin'ny kalitaon'ny klinika.
Ny fanadihadian'ny gazety Ganey dia manamafy ny fifandraisan'ny mpamatsy marary amin'ny fanadihadiana feno sy ny fomba fiasa manodidina izay ahafahan'ny mason-tsivana sy ny refin'ny fahombiazana.
Ny indostrian'ny hotely dia nahafantatra hatrany ny fahafaham-pon'ny vahiny ho tanjona. Farafaharatsiny farafaharatsiny farafaharatsiny, ny vahiny dia tokony ho "afa-po;" na izany aza, mihoatra ny andrasan'izy ireo no tanjona. Ny indostria dia nanokana ezaka sy loharanom-pahalalana am-polony taona maro hanatsarana ny vokatra sy ny rafitra fitantanana mba hijanona ho mpifaninana.
Ny hopitaly dia mety hampiasa an'izany lesona izany amin'ny alàlan'ny fananganana sy fampifanarahana ny fomba fanao amin'ny hotely izay mety hiteraka fanatsarana lehibe amin'ny fankatoavana sy ny fahafaham-po amin'ny marary, amin'ny farany mahasoa ny mpiasan'ny fitantanana hopitaly, ny dokotera, ny mpiasa, ny marary ary ny tombom-barotra ambany.
trano fandraisam-bahiny 3 1
Ny hopitaly sy ny hôtely dia mifantoka amin'ny vahiny / marary mahazo trano sy serivisy. Tahaka ny isan'ny fahasamihafana misy eo amin'ny trano fandraisam-bahiny (manomboka amin'ny Holiday Inn Express ka hatramin'ny hotely Four Seasons) dia misy habeny lehibe amin'ny haben'ny hopitaly ary koa ny ambiansy ary ny kalitaony. Samy mampiasa ambaratongam-piasan'ny mpiasa manana andraikitra isan-karazany. Ny hopitaly sy ny hôtely dia mamorona traikefa ho an'ny mpanjifany / marary manana fihetseham-po mifandraika amin'izany.
Ny trano fandraisam-bahiny dia aloan'ny mpanjifa mivantana any ivelany nefa ny hopitaly kosa dia matetika aloa amin'ny alàlan'ny orinasa fiantohana mpanelanelana. Ao amin'ny hopitaly dia marary ny mpanjifa ary matetika no mitebiteby sy matahotra ny fitsaboana ataon'izy ireo. Ny marary dia mety manan-tsafidy amin'izay trano tadiaviny; na izany aza, matetika, tsy misy safidy satria ny ankamaroan'ny marary dia voan'ny vonjy taitra ara-pitsaboana ary tsy maintsy any amin'ny hopitaly izy ireo. Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, ny mpanjifa dia vahiny, mazoto (raha miala voly) amin'ny fitsidihan'izy ireo. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia misafidy ny hotely sy ny fotoana ijanonany ny vahiny. Hatrany am-piandohana, sahirana ny hopitaly - noho izany dia tokony hanao mihoatra ny trano fandraisam-bahiny izy ireo mba hiantohana ny fampiononan'ny marary. Ny laharam-pahamehana indrindra amin'ny hopitaly dia, ary tokony hatao hatrany, ny fanatsarana ny fahasalaman'ny marary, fa ny fampiononana sy ny fahasalaman'ny marary kosa dia tsy tokony hatao ambanin-javatra eny an-dalana.
Miatrika fanamby maro ny dokotera amin'ny fanomezana fahafaham-po avo indrindra an'ireo marariny na dia maro aza ny dokotera tsy mahita ny marariny rehefa any amin'ny ER na am-pandriana any amin'ny hopitaly (farafaharatsiny amin'ireo hopitaly roa New York efa niainako) ka vao mainka mihombo traikefa tsy mahafinaritra amin'ny iray miaraka amin'ny fitaintainanana mitombo.
Andraikitra sy andraikitra
trano fandraisam-bahiny 4 1
Ny andiana mpitsabo amin'ny fahasalamana dia mety hampatahotra ny marary (izany hoe ny mponina, ny mpanampy amin'ny mpitsabo, ny mpitsabo mpanampy, ary ny hafa manana traikefa isan-karazany) izay miditra sy ivelan'ny toerana misy ny marary - tsy manazava mihitsy hoe iza izy ireo, ny asany, ny andraikiny. na ny andraikitr'izy ireo amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny traikefa amin'ny marary ary tsy dia miverina miaraka amin'ny fanehoan-kevitra na vaovao vaovao. Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, ny mpiasa dia namaritra mazava tsara ny anjara andraikiny (latabatra, mpiambina, mpanampy amin'ny efitrano, mpandroso sakafo); any amin'ny hopitaly kosa, ireo mpikambana isan-karazany ao amin'ny ekipa mpitsabo dia mety ho vahiny amin'ny marary. Ny hopitaly sasany dia nametraka karatra tarehy (karatra misy sary, fampiofanana ary fahalianana no atolotra ny marary tsirairay) ary nanatsara ny fahalalan'ny marary ny anarana sy ny anjara asan'ny dokotera ao amin'ny hopitaly sy ny mpikambana ao amin'ny ekipa izay ifaneraserany izy ireo.
SISTEMA SY FOMBA FIVAROTANA
Alohan'ny hidirana amin'ny marary dia mandalo fitsapana any amin'ny laboratoara, mandray fanontaniana momba ny toe-pahasalamany ankehitriny - izany rehetra izany dia miteraka tahotra sy tsy fahazoana aina mihombo. Mba hampihenana izany fanahiana izany dia manampy raha misy hopitaly manome fampahalalana amin'ny marary, mba hahafantaran'izy ireo izay antenaina.
Fantatry ny mpiasan'ny trano fandraisam-bahiny fa ny fanandramana vahinin'ny mpitsidika 15 minitra voalohany dia manakiana rehefa mametraka ny feon'ny fitsidihana izy ireo. Fantatr'izy ireo ny fotoana fahatongavan'ny vahiny nasaina, nodinihin'izy ireo ny mombamomba ny olona sy ny sarin'ilay vahiny ary rehefa tonga ilay vahiny dia afaka miarahaba azy ireo amin'ny hafaliana manao hoe: “Miandry anao izahay.”
Mifanohitra tanteraka amin'izany, ny hopitaly dia mety tsy hahalala firy momba ny fahatongavana vaovao (raha tsy hoe efa marary tamin'ny hopitaly taloha izy ireo ary ao anaty tahiry ny vaovao). Na inona na inona fikambanana taloha, ny hopitaly dia mitaky ny "mpanjifa" hanao sonia imbetsaka amin'ny toeram-piantsonana marobe, miandry matetika mandritra ny ora maro ao amin'ny faritra fandraisana, ary mazàna mandray ireo marary manana, "anarana, karatra sary, karatra fiantohana."
Miaraka amin'ny habetsaky ny fampahalalam-baovao momba ny marary sy ny ora fiandrasana, ny fisian'ny efitrano ary ny fisian'ny dokotera, be ny azo natao hanatsarana ny fizotran'ny fizahana. Ny fanangonana fampahalalana misimisy dia azo ahena, ny sary misy ny marary dia azo ampiasaina hanombohana ny marary ary ny fotoana fiandrasana dia ahena amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fizotry ny fidirana ary ny fiantohana ny fisian'ny efitrano amin'ny ora fahatongavan'ny marary.
Ny mpitantana dia tokony hanao asa tsara kokoa amin'ny fanazavana amin'ny marary ny antony anontaniana azy ireo matetika hatrany (izany hoe mba hanamafisana ny mombamomba azy ireo sy hiantohany ny fiarovana azy ireo) na hampiasa teknolojia hanafoanana ny fahaverezana.
trano fandraisam-bahiny 5 1
Ny lafiny fitsikerana ny traikefa niainan'ny marary dia ny mpitsabo azy ireo. Tao amin'ny hopitaly roa tany New York dia nahazo ny tsy fahombiazana aho, ny fahitana dokotera mihoatra ny nano-segondra dia miavaka ary ny fifampiresahana misy dikany miaraka amin'ny dokotera dia mahatsiaro ho mandresy amin'ny loteria. Ny marary dia tsara vintana ihany koa raha afaka manana fifandraisana mivantana amin'ny mpitsabo azy.
Na amin'ny fanadihadiana an-tsaha aza, dia asehon'ny teknika fa ny laharam-pahamehan'ny dokotera dia mifandraika mivantana amin'ny fahaizana miresaka, ao anatin'izany ny fanehoana fanajana, fihainoana tsara, fanomezana torolàlana mora takarina, fandaniana fotoana ampy amin'ny marary, ary fanazavana ny fitsapana sy ny vinavinan'ny fitsaboana / fitsapana efa nomanina. . Fihetsika tsotsotra toa ny dokotera nipetraka fa tsy nijoro teo am-pandriana no naseho nanisy fiovana. Ny fifandraisana amin'ny dokotera sy ny marary nohatsaraina dia mifandray amin'ny valin'ny marary tsara kokoa.
Ny dokotera sy ny mpitsabo dia tokony hampiofanina amin'ny AIDET satria manome torolàlana henjana sy ankapobeny hanatsarana ny fifandraisan'ny marary izay manantitrantitra ny fotokevitra fototra amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa tsara. Natao hampihenana ny fitaintainan'ny marary, hampitombo ny fanarahan-dalàna ary hanatsara ny vokatra klinika.
1. Ekeo (ahoana no fomba hitenenana ilay marary)
2. Ampahafantaro (iza ianao / izahay manana fiaviana sahaza)
3. Faharetany (fivoriana, fomba fiasa, fijanonana)
4. Fanazavana (amin'ny teny tsotra)
5. Misaotra anao (voninahitra ho an'ny fanompoana / fanampiana)
Ho fanampin'izany: ny dokotera sy ny ekipany dia tokony:
a) Mipetraha (mihevitra ny marary fa mandany fotoana 40 isan-jato miaraka amin'izy ireo ianao ary mankafy kokoa ny fitsidihana)
b) Fitantanana (miresaka momba ny tanjaka sy ny fiavian'ny ekipa / mpiasa / andrim-panjakana)
c) Mihainoa (manontania ary avelao ny marary hiresaka mandritra ny 1-2 minitra amin'ny fandondohan-doha hanaiky).
Ny "traikefa an-trano" ananan'ny marary dia miankina amin'ny fifandraisany amin'ny dokotera ihany fa amin'ny ekipan'ny hopitaly iray manontolo misy mpitsabo mpanampy, mpitsabo mpanampy, mpitsabo, mpiasan'ny fitaterana, mpiasan'ny serivisy sakafo ary teknisiana.
Ny fanadihadiana dia mampiseho fa ny tahan'ny mpitsabo mpanampy ambony sy ny fifandraisana tsara amin'ny mpitsabo dia misy fiatraikany tsara amin'ny fahafaham-pon'ny marary. Ny mpiasan'ny hopitaly rehetra dia tsy maintsy ampidirina amin'ny fepetra hanatsarana ny kalitaon'ny traikefa amin'ny marary. Betsaka ny fanadihadiana ataon'ny marary no miresaka mivantana an'ireo lafin'ny fijanonany ireo ary mampifandray ny vola amin'ny fahombiazan'ny mpiambina, ny mpitatitra ary ny mpitsabo mpanampy.
Famolavolana drafitra sy fanaraha-maso
trano fandraisam-bahiny 6 1
Ny fiomanana hivoaka ny hopitaly dia fiheverana lehibe. Any amin'ny hopitaly sasany, ny mpitsabo mpanampy iray dia mizaha ny torolàlana momba ny famoahana ary ny mpiasan'ny fitaterana iray kosa mamily ny marary mankeny amin'ny lobi. Any amin'ny hopitaly hafa, misy limousine mihaona amin'ny marary amin'ny fivoahana ary mitondra azy ireo mivantana any an-tranony.
Nampalahelo aho ary tsy niaina famoahana "nomanina" tao amin'ny NYU Langone. Nampandrenesina 45 minitra mialoha ny famoahana ahy (ny famoahana nomanina dia iray andro taty aoriana). Tsy navela handro aho, namporisihina hiakanjo haingana, ary na dia tsy tao am-pandriana nandritra ny andro maromaro aza aho dia voatery nandeha avy tao amin'ny efitrano, nankany amin'ny ascenseur, namaky ny lavarangana lehibe sy mahasadaikatra mba hanomezana havandra taxi ary modia mody. Ny protokolota - dia - miala eto fa mila ny fandrianao ianao!
Ny marary dia tokony efa nanomana fotoana fanaraha-maso alohan'ny hamoahana azy; na izany aza, andraikitra mazàna tsy raharahina izany matetika mampitombo ny haavon'ny marary rehefa mifindra trano izy. Rehefa noroahina tany ivelan'ny NYU Langone aho dia tsy nisy fanendrena fanaraha-maso narindra, na dia tiako be aza ny fanafody natokana ho an'ny fitsaboana ara-batana satria tsy dia teo am-pandriana nandritra ny fotoana ela be aho ary nahita olana nandeha.
Ho fanampin'ny fanendrena fanaraha-maso voalahatra, ny fampahalalana momba ny fifandraisana dia tokony hampidirina rehefa oviana ary iza no hifandraisana raha misy ny olana / olana mitranga ao an-trano sy ny asa tokony ho vita (izany hoe meds horaisina, sakafo hanaraka).
Raha tsy afaka mikarakara ny tenany ilay marary, dia tokony omena azy ireo ny mpiasa mpanampy raha mbola ao amin'ny hopitaly izy ireo. Ny famelana ny marary hiverina an-trano tsy misy fanampiana ara-pahasalamana / fanampiana dia mety hampidi-doza ary voafetra ho tsy etika. Ity dingana ity dia tokony alamina amin'ny consultant miaraka amin'ny mpiasa sosialy amin'ny hopitaly sy ny marary.
Fanandramana aorian'ny fijanonana
Rehefa avy nandao ny hopitaly ny marary dia tokony hahazo fanadihadiana momba ny zavatra niainany tany amin'ny hopitaly. Mandritra ny hopitaly dia tokony hampandrenesina izy ireo fa ny fanadihadiana dia hanampy ny hopitaly sy ireo marary ho avy. Ny olona mamaly amin'ny fanandramana ratsy dia tokony hifandraisan'ny mpikambana iray ao amin'ny ekipa mpitsabo ary raha azo atao dia ahitsy ny lesoka. Ny tompon'andraikitra amin'ny hopitaly dia tokony hijery media sosialy an-tserasera ihany koa, ary koa ny Yelp sy Facebook momba ny fanehoan-kevitry ny marary toy ny fandalinana, dia mampiseho fa ny fanombanana ny marary sy ny fitantarana am-bava dia mety hisy fiantraikany lehibe amin'ny safidy ataon'ny marary.
Tao amin'ny NYU Langone dia nandalo "tafatafa nivoahana" aho, niaraka tamin'ny "mpiasan'ny marary / hopitaly izay nanontany momba ny zavatra niainako tany amin'ny hopitaly. Nizara ny zavatra hitako rehetra aho niaraka tamin'ny tolo-kevitra hanatsarana. Ny valinteniny, “Alefaso any amin'ny CEO ny hopitaly. Liana izy hamaky ny taratasinao. ” (Fanamarihana: ny tatitra nataoko navoaka dia nalefa tamin'ny mpitantana ny hopitaly ary tena tsy nisy tohiny mihitsy). Nahazo antso fanarahana iray avy tamin'ny mpitsabo mpanampy ER izay nanontany momba ny toetrako aho. Rehefa nitatitra aho fa tsy salama ary mila fanampiana sy / na fampahalalana fanampiny dia nolazaina tamiko fa ny asany (sy ny asan'ny departemantan'ny ER) dia tsy ny hanome fanadihadiana ara-pitsaboana na fanafody fa hampiorina ny marary ary handefa azy mody.
Oad. Misy zavatra tsy mety
trano fandraisam-bahiny 7 1
Na eo aza ny ezaka faran'izay tsara azon'ny rehetra atao, dia afaka mandeha andalana ny raharaha. Ireo hotely dia manana rafitra mavitrika hamaritana ny tsy fahafaham-pon'ny vahiny. Raha misy olana amin'ny efi-trano na ara-tsakafo dia misy mpikambana iray miatrika ny olana ary raha ilaina dia manantona mpitantana sampana na tale jeneraly. Raha toa ka tsy voavaha amin'ny fahafaham-pon'ny vahiny ny olana dia mety homena tamberim-bola izy na trosa ary koa fifonana ataon'ny mpiasa ambony. Gaga sy faly matetika ireo vahiny amin'ny fijerena izany ary mamadika vahiny tsy faly ho mpanjifa mahatoky izy io.
Any amin'ny hopitaly dia tsy azo averina ny vola na omena ny mari-bola; na izany aza, tokony handany fotoana hamantarana ny tsy fahafaham-po amin'ny marary. Ny "pulsa fahafaham-po" an'ny marary dia tokony hojerena isan'andro ary hojerena avy hatrany rehefa misy olana / olana hita. Ny fifampiresahana tsara dia zava-dehibe indrindra amin'ny tranga fahasarotana na fahadisoana tsy ampoizina, satria ny fitantanana tsy mety ny toe-javatra dia mety hitarika fitoriana na ratsy kokoa. Raha tsy afa-po ny marary iray dia manjavona ny fotoana hanitsiana ny fahatsapan'izy ireo ny hopitaly rehefa lasa ny marary. Ny fanitsiana traikefa ratsy dia mety hamela olona iray hanana traikefa tsaratsara kokoa noho ny tsy mbola nanana olana teo aloha.
Hotely maro no mampiasa tatitra isan'andro hanarahana ny fahafaham-pon'ny vahiny ao an-trano. Ny antontan-taratasy dia atao ao amin'ny portfolio elektronika an'ny vahiny isaky ny misy zavatra tsara na ratsy milaza na miaina. Ny traikefa ratsy dia azo averina alohan'ny fitsidihan'ny vahiny satria tsy tokony hisy vahiny hiala tsy sambatra mandrakizay. Ny "tsara" dia tsy ekena velively ho valiny. Raha tsy RAVING ny vahiny momba ny fitsidihana dia heverin'ny hotely fa tsy lavorary izy ary ho avy hiresaka manokana amin'ilay vahiny ny GM.
Fifandraisana: marary, mpiasa, vokatra
Ny hopitaly sy ny trano fandraisam-bahiny dia tsy misy afatsy ny mpiasan'ny mpanjifa malemy indrindra. Ny traikefa amin'ny marary iray any amin'ny hopitaly dia tsara ihany raha amin'ny fifandraisany ratsy indrindra ary tsy maninona izany raha olona be asa loatra na mpanampy mpitsabo izay tsy nanampy azy ireo niditra tao amin'ny trano fidiovana haingana. Ny mpiasa fa tsy ny mpitantana no mahay mitaona ny traikefan'ny mpanjifa. Ny tanjona voalohany dia ny hanompo tsara ny mpiasan'ny hopitaly, satria ny marary dia ho voakarakara tsara. Ao amin'ny trano fandraisam-bahiny, io fanamafisana io dia avy any ambony ka miasa ny mpitantana mba handray sy hitazonana ireo olona tsara indrindra izay mirehareha sy faly amin'ny toerana iasan'izy ireo.
Avy amin'ny hopitaly ka hatramin'ny fandraisam-bahiny
trano fandraisam-bahiny 8 1
Ny mpitantana ny hopitaly dia tokony:
1. Miezaha mafy hanatsara ny 15 minitra voalohany niainan'ny marary
2. Hamafiso ny maha-zava-dehibe ny fampivoarana ny fifandraisana amin'ireo marary mandritra ny fijanonany any amin'ny hopitaly
3. Araho hatrany ny haavon'ny fahafaham-pon'ny marary ary miditra an-tsehatra faran'izay haingana rehefa misy ny olana
4. Araho ny marary aorian'ny famoahana azy ireo any amin'ny hopitaly hahazoana valiny azo ampiasaina hanatsarana ny fahombiazan'ny ho avy.
5. Tandremo ny fisian'ny Internet amin'ny "fitantanana laza" satria hamaky momba ny hopitaly ny marary alohan'ny hahatongavany any amin'ny toeram-pitsaboana ary avy eo manoratra momba ny zavatra niainany avy eo
6. Ny fitantanana dia tokony mikendry ny hamorona tontolo iainana izay falifaly sy mahomby daholo ny mpiasan'ny hopitaly, afaka mikarakara tsara ny marary izy ireo.
Ho avy ho an'ny hopitaly?
trano fandraisam-bahiny 9 1
Ny fikarohana sasany dia milaza fa ny hopitaly dia tsy ho tafavoaka velona amin'ny endriny ankehitriny. Ny rafi-pitsaboana amerikana dia nanjary lafo vidy ary mety hanimba ny fahasalaman'ny tena. Araka ny voalazan'ny Dr. Dan Paul (Colorado Springs), ny indostrian'ny fitsaboana any Etazonia dia mahatsiravina ho an'ny marary sy ny dokotera. Hitany fa “mampiasa modely taloha ny hopitaly.”
Mahaliana ny manamarika fa ny roa ampahatelon'ny Amerikanina izay manambara ny fatiantoka dia nilaza antony ara-pitsaboana. Tamin'ny taona 2018, ny ampahatelon'ny $ 2.6 trillion nolaniana tamin'ny fitsaboana dia nankany amin'ny hopitaly, fa ny 20 isan-jato kosa nankany amin'ny dokotera sy klinika (Kaiser Family Foundation). Mpanao gazety John Hopkins Medicine tamin'ny 2016 fa olona maherin'ny 250,000 any Etazonia no maty isan-taona noho ny lesoka ara-pitsaboana, ka nahatonga ireo lesoka ireo ho antony fahatelo nahatonga ny fahafatesan'ny aretim-po sy homamiadana.
Ahoana ny fahitan'ny modely hopitaly ankehitriny ho toy ny dinôzôra? Rahoviana ny rafi-pitsaboana no hanova ny tenany ho zavatra tena mifanaraka amin'ny (sy mihoatra) ny filàn'ny marary? Misy vonona handray vinavina? Ny vatako kristaly amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny famelomana ny aiko ary tsy misy hanaovana consultations.